Nandrolone Propionate ny akora mpamatsy & mpanamboatra - orinasa
Nandrolone propionate ny vovoka dia iray amin'ireo steroids mahery indrindra amin'ny anabolic-androgenic azo amidy eny an-tsena. Ampiasain'ny mpanao fanorenana sy ny atleta hampitombo ny hery sy ny faharetan'ny hozatra.
Nandrolone Propionate Rohan'ny fitaovana (7207-92-3) video
Nandrolone Propionate Rohan'ny fitaovana (7207-92-3) Description
Nandrolone Propionate Ny fitaovan'ny rongony dia iray amin'ireo steroïde malaza indrindra. Ny lazaina dia azo lazaina fa vokatry ny fisian'ny Nandrolone Propionate Raw material dia mampiseho ny fiantraikany anabolika manan-danja amin'ny vokatra hafa androgenic. Ny Nandrolone Propionate dia famelabelarana mahomby izay mamokatra kalitao, ny fahazoana maharitra ny hozatra, noho ny halavan'ny androm-piainan'ny zava-mahadomelina (manodidina ny 8 andro).
Nandrolone Propionate Ny fitaovana ampiasaina dia ampiasaina amin'ny aretina mandoza mando, mirehitra mafy, alohan'ny aorian'ny fandidiana fanasitranana ary ny osteoporose, aloha loatra ary voakarama ho an'ny ankizy, ary koa ho an'ny tsy azo ampiasaina amin'ny kanseran'ny nono. ny kanseran'ny nono, ny kanseran'ny nono, ny angioedema herita, ny tsy fahampian'ny antithrombin III, ny fibrinogen tafahoatra, ny tsy fahampian-tsakafo sy ny aretin'i Turner ary ny faminaniana momba ny angioedema heredraedem.
Nandrolone propionate fitaovam-piadiana (7207-92-3) Specifications
Anarana simika 17-PROPIONATE; NANDROLONE 17-PROPIONATE;4-ESTREN-17BETA-OL-3-ONE 17-PROPIONATE;4-ESTREN-17-BETA-OL-3-ONE PROPIONATE;17-beta-hydroxyestr-4-en-3-one 17-propionate;19-NORTESTOSTERONE 17-PROPIONATE;19-NORTESTOSTERONE PROPIONATE
molekiolan'ny Formula C21H30O3
molekiolan'ny Wvalo 330.46
mitsonika Point 55-60 °
Tavy 453.6 ° C amin'ny 760 mmHg
Ny antsasaky ny biolojia manodidina ny 8 andro
Application Nandrolone propionate Ny fitaovam-pitaovam-piasana dia ampiasaina amin'ny aretina mandoza mandoza, mirehitra matevina, alohan'ny aorian'ny fandidiana ny fery ary ny osteoporose, vao haingana sy saro-kenatra ho an'ny ankizy, ary koa ho an'ny tsiranoka tsy azo ampiasaina amin'ny tranon-jaza.
Inona ny Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3)?
Ny Nandrolone Nandrolone Propionate dia iray amin'ireo fantatry ny steroids anabolic ampiasain'ireo mpandidy sy atleta hampitombo ny herin'ny hery sy ny faharetana. Maro amin'ireo atleta no mampiasa io steroid io mba hahazoana hery sy tanjaka mahery kokoa. Ity steroid ity dia hita amin'ny endriny be pitsiny.
A19-na anabolika anabolika. Niova kely izy io mba hitondra ny fiovana amin'ny fanabeazana testosterone. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia izy io dia iray amin'ireo dingana testosterone misy vokany lehibe anabolika saingy kely kokoa ny valin'ny androgenic. Io no tena ampiasaina indrindra raha mampihena ny DHN ity steroid ity raha ny steroids hafa kosa dia mampihena ny DTH.
Nandrolone Propionate Rohan'ny fitaovana (7207-92-3)
Nandrolone Propionate Ny fitaovam-pitaovana (7207-92-3) dia heverin'ny maro fa ny steroid amin'ny ankapobeny ho an'ny lehilahy mampiasa ny Nandro (Nandrolone Propionate Raw Material) dia matetika no nampidirana in-dimy na in-dimy isan-kerinandro. Amin'io isa io, ny fiovan'ny estrogen dia kely ka tsy misy olana ny gyno. Ho an'ny bodybuilding, ny Nandro (Nandrolone Propionate Raw Material) dia mety ho tafiditra tanteraka amin'ny masinina sy ny cycles cut.It dia mora amin'ny aty ary mampiroborobo ny haben'ny haavony sy ny haben'ny tanjaka rehefa mampihena ny tavy.
Nandrolone Propionate Rohan'ny fitaovana (7207-92-3) Dosage
Ny Propionate Nandrolone dia hita amin'ny endriny iray. Izany no mahatonga ny fotoana tsy dia ilaina loatra mba hampifangaroina sy ho lasa mavitrika. Ilaina ny 2 hatramin'ny herinandro 3 mba hahitana azy. Noho izany dia soso-kevitra ny hampiato ny fampiasana Nandrolone Propionate twoto telo herinandro mialoha ny fifaninanana na ny lalao ahafahana mitsapa ny fitsaboana zava-mahadomelina. Ho an'ny fahasalamana ara-pahasalamana dia nampiasaina ho 100 hatramin'ny 200mg isan-kerinandro mba hiatrehana ny tsy fahasalamana sy ny aretina hafa. Misy atleta sasany mampiasa ny 300 amin'ny 400mg isan-kerinandro mba hahazoana vokatra tsara kokoa.
Nandrolone Propionate Rohan'ny fitaovana (7207-92-3) Mampiasa
Ny Propionate Nandrolone dia ampiasain'ireo mpanao fanorenana sy atleta hampitombo ny herin'ny hery sy ny faharetana. Voalaza ihany koa fa ny fitsaboana ny kanseran'ny nono, ny kanseran'ny nono, ny angioedema herita, ny tsy fahampian'ny antithrombin III, ny fibrinogen tafahoatra, ny tsy fahampian-tsakafo sy ny sendran'ny Turner sy ny famindrana ny angioedema.
Buy Nandrolone Propionate Raw materials (7207-92-3) from Buyaas.com